Qaraxyo ka dhacay Turkiga - BBC Somali - Warar
Markii u dambaysay ee la cusboonaysiiyay: 11 Mey, 2013, 17:51 GMT 20:51 SGA
In kabadan boqol qof ayaa qaraxyada ku In kabadan boqol qof ayaa qaraxyada ku dhaawacmay.
Masuuliyiinta Turkiga ayaa sheegay in ugu yaraan afartan qof ay ku dhinteen Reyhani oo u dhow xudduuda Suuriya kadib markii laba baabuur ay ku qarxeen. In ka badan boqol qof ayaa ku dhaawacmay qaraxyada.
Reyhanli waxaa degan qaxooti badan oo ka soo tagay dagaalka Suuriya.
Ra'iisalwasaare ku xigeenka Turkiga ayaa sheegay in milatariga iyo sirdoonka Suuriya ay ku tuhunsan yihiin qaraxa.